John Mellencamp - Safarka Qoyska | Seymour, IN | Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson
Bogga ugu weyn / John Mellencamp / John Mellencamp
John Mellencamp ee la soo dhaafay waxaa si adag loogu beeray Seymour iyo County Jackson. Mellencamp wuxuu halkan ku dhashay Oktoobar 7, 1951.
Ka badbaaday hore ee laf-dhabarka, Mellencamp wuxuu ku koray Seymour wuxuuna ka qalin jabiyay Dugsiga Sare ee Seymour isagoo qayb ka ah Fasalka 1970.
Mellencamp wuxuu soo saaray albumkiisii ​​ugu horreeyay, "Chestnut Street Incident" 1976 wuxuuna soo saaray wadar ahaan 24 album. Wuxuu uruuriyay 22 Top 40 hits wuuna ku guuleystay Grammy.
Riwaayadiisii ​​ugu horreysay ee "Waxaan U Baahanahay Jacayl" wuxuu wadada u xaaray albumkiisa jabinta 1982 ee "American Doqon." Albamkaasi wuxuu soo saaray hal-ku-dhiggiisii ​​ugu guusha badnaa, "Jack iyo Diane" oo afar toddobaad ku qaatay lambarka koowaad
Dagmada Jackson aad ayey ugu faantaa John Mellencamp dadweynuhuna waxaa lagu casuumay inay arkaan muuqaalkayaga Xarunta Booqdayaasha Gobolka ee Jackson. Waxa kale oo jira bandhig ka socda Koonfurta Indiana Xarunta Farshaxanka, halkaas oo John uu ku leeyahay guriga, laakiin u kireeyo hay'adda.
Sannadkii 2019, mural ku yaal dhinaca Dukaankan Muusikada Guitar-ka ee Old waxaa dhammaystiray farshaxamiistaha reer Indianapolis Pamela Bliss.
Dhammaan waqtigii Mellencamp ee uu halkan ku qaatay intii uu yaraa oo dhan iyo xirfaddiisiiba waxay la timid nolol socdaal wadista maqalka ah, oo ay abuurtay Xarunta Booqdayaasha ee Degmada Jackson. "Xididdada rookaha Mareykanka ah," waxay soo bandhigaysaa muuqaal Mellencamp ah oo dadka badankood waligood aysan arkin. Astaamaha CD-ga ayaa joogsanaya meelo badan oo ka mid ah goobihii jiritaanka ee John iyo khariidad faahfaahsan oo ku saabsan Seymour.
CD-ga waxaa laga iibsan karaa Xarunta Booqdayaasha ee Degmada Jackson, 100 North Broadway Street, Seymour, $ 10. Heshiisyada shatiga awgood, CD-ga lama geyn karo meel ka baxsan Indiana. Macluumaad ahaan, kala xiriir Xarunta Booqdayaasha ee Degmada Jackson lambarka 855-524-1914.